Bogga ugu weyn 10ka Qareen ee ugu Mushaharka Badan Mushaarka Sanadka 2022 | Dalalka Ugu Fiican
Haddii aad taqaanid garyaqaan dambiile ah oo ka mid ah tobanka ugu sarreeya qareennada dambiyada ee ugu mushaharka badan, gaar ahaan sannadka 2022, way u qalmaan. Ma rabtaa inaad ogaato sababta?
Inaad noqoto garyaqaan dambiile ah ayaa ka badan shaqo uun; waa xirfad ama karti la helay. Qareenka dambiyada waxaa mararka qaarkood loo yaqaanaa difaaca dadweynaha ama garyaqaanka difaaca dembiyada.
Qareenka dambiga waa garyaqaan diiradda saara sharciga dembiyada iyo ciqaabta. Qareenadu waxay matalaan kuwa lagu soo eedeeyey inay dembi galeen.
Sharciga dembigu waa ikhtiyaar shaqo oo faa'iido leh oo ay tahay in dhallinyarada lagu dhiirrigeliyo inay raacaan. Marka, ma jeclaan lahayd inaad ogaato waxa uu yahay xeerka ciqaabtu? Kadib, aan ku quusno.
Waa maxay Sharciga Dambiyada oo dhan?
Qareennada dembiyadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan bulshadeena iyo maamulka caddaaladda. Dhammaantood waa xirfadlayaal, haddii ay dacwad ku soo oogayaan dambiilayaasha, difaacayaan kuwa lagu soo oogay dambiyo, ama ay qabtaan waajibaadyo kale.
Sharciga dembigu waa mid ka mid ah aaladaha bulshooyinka habaysan u shaqaaleeyaan si loo ilaaliyo xuquuqda shaqsiga iyada oo sidoo kale la ilaalinayo jiritaanka muddada fog ee kooxda.
Sharciga dembigu waa hay'adda sharciga ee xukuma, soo oogidda, iyo maxkamadeynta tuhmanayaasha, iyo sidoo kale ganaaxyada iyo beddelka daaweynta ee ay heli karaan dambiilayaasha la xukumay.
Dambiyada iyo dambiyada waa labada nooc ee sharciga dembiyada ee jira.
Xadgudubku waa dembi leh heer aad u hooseeya, sida weerarrada yaryar, dambiyada taraafikada, ama xatooyada. Intaas waxaa sii dheer, inta badan gobollada, dembiga yar waxaa lagu xukumay hal sano ama ka yar. Dambiyada, dhanka kale, waa xadgudubyo aad u daran marka loo eego dembiyada xun -xun.
Dambiilayaasha waxaa ka mid ah dil, gacan ku dhiigle, ka ganacsiga daroogada, kufsi, dhac, iyo gubis.
Qareennada dembiyada ayaa door muhiim ah ka ciyaara bulshada dhexdeeda tan iyo markii ay maareeyaan rabshadaha qoyska, dembiyada galmada, dambiyada rabshadaha, iyo dambiyada mukhaadaraadka, iyo sidoo kale wadista baabuurka oo hoos imanaya (DUI), xatooyo, lunsasho, iyo khiyaano.
Qareennada dembiyadu waxay leeyihiin door muhiim ah oo ay ka ciyaaraan bulshada dhexdeeda, kuwaas oo ah:
Baadh xaaladda oo la hadal markhaatiyada.
Abuur difaac iyo xeelad kiis.
Mooshinka xil ka qaadista iyo hindisayaasha cabudhinta waa in la qoraa, la xareeyaa, lagana doodaa.
Maxkamadeynta, qareenka eedaysanaha
Rafcaanada waa in la qoraa, la xareeyaa, oo lagu doodaa.
Kala xaajoodo gorgortan qirasho xeer -ilaaliyeyaasha eedeymaha aan sidaa u sii culusayn.
Immisa ayuu qaataa garyaqaanka dembiga?
Qareennada dembiyada, tusaale ahaan, waxay kasbadaan celcelis ahaan $ 76,374 sannadkii qareennada la -hawlgalayaasha ah.
Magdhawga qareennada waxaa lagu go'aamiyaa dhowr arrimood, oo ay ku jiraan qaddarkooda waayo -aragnimo iyo kartidooda.
Kuwa u shaqeeya dawladda, sida xeer -ilaaliyeyaasha iyo difaacayaasha dadweynaha, badiyaa waxay ku bilaabaan mushahar ka hooseeya kuwa u shaqeeya shirkad gaar loo leeyahay.
Qareennada dembiyada ee u shaqeeya shirkadaha sharciga ayaa sida caadiga ah qaata lacagta ugu badan; qareennada dambiilayaasha ah ee khibradda leh ayaa si fiican u kasban kara lixda tirooyin. Qareenada difaaca dembiyada oo matala kuwa aadka u sarreeya, dambiilayaasha hodanka ah ee ku jira maxkamadeynta sare ayaa inta badan ka mid ah kuwa ugu mushaarka badan.
Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqada ee Mareykanka (BLS), kuwan soo socda ayaa ah xaddiga mushaharka ee dhammaan qareennada, oo ay ku jiraan qareennada dambiilayaasha:
Mushaharka sanadlaha ah ee dhexdhexaadka ah waa $ 120,910 ($ 58.13/saacaddii
Mushaharka Sanadlaha ah ee ugu sarreeya 10%: In ka badan $ 208,000 ($ 100/saac)
Mushaharka Sanadlaha ah ee Hoose 10%: In ka yar $ 58,220 ($ 27.99/saac)
Laga bilaabo Juun 24, 2021, celceliska mushaarka billaha ah ee Garyaqaanka Dambiyada ee Mareykanka waa $ 6,174.
Haddaba, immisa ayuu qareenka dambiyada sameeyaa sanad dhan adduunka oo dhan?
Xaddiga lacagta qareenka dambiilaha ah wuxuu kasban karaa cinwaankooda shaqo.
Saddexda nooc ee aasaasiga ah ee qareennada dembiyada ayaa hoos ku taxan, oo ay la socdaan celcelis ahaan mushaharkooda:
Qareen difaaca gaarka ah
Dacwad -oogayaashu waa qareenno dambiileyaal ah oo ku dooda magaca dawladda si ay u caddeeyaan in eedaysanuhu yahay dembiilaha lagu soo oogay. Waxay sameeyaan baaritaan, waxay ururiyaan caddayn, waxayna wareystaan ​​markhaatiyada.
Waxa kale oo ay go'aansadaan in ay dacwad ciqaabeed ku soo oogaan qof iyo in kale iyada oo ku salaysan baadhitaankooda sharciga ah.
Dakhligooda sanadlaha ah celcelis ahaan $ 49,918.
Kuwa aan helin la -taliye gaar ah waxaa matala difaacayaasha dadweynaha, oo ah shaqaale dowladeed.
Hadafkoodu waa inay beeniyaan caddaymaha ka dhanka ah macmiilkooda, u dagaallamaan ganaaxyo ka yar, iyo u doodidda baahiyaha sharci ee macmiilkooda guud ahaan.
XIDHIIDHKA: 10 Siyaabood Oo Lagu Helo Qiimo Jaban Oo Timaha Bilaashka Ah Agtaada
Waxay ka shaqeeyaan hawlo badan oo kala duwan, iyadoon loo eegin eedeymaha.
Dakhligooda sanadlaha ah celcelis ahaan $ 60,839.
Qareennada difaaca gaarka ah waxaa shaqaaleeya kuwa lagu soo oogay dembi laakiin ma rabaan inay qabsadaan qareen dadweyne.
Qaar ka mid ah qareennada difaaca gaarka ah ayaa ku takhasusay nooc gaar ah oo difaaca dambiyada ah, halka kuwa kalena ay matalaan macaamiil kala duwan.
Waxay leeyihiin mas'uuliyado la mid ah difaaca dadweynaha, laakiin inta badan waxay qabtaan kiisas yar markiiba waxayna haystaan ​​saacado badan oo qiimeeyaan dabacsanaanta.
Mushaharkooda celcelis ahaan waa $ 89,961 sanadkii
10 -ka Waddan ee Lacagta Ugu Badan Qareennada Danbiyada
Xaddiga lacagta lagu bixiyo kaalmada sharciga way kala duwan tahay iyadoo ku xiran meesha aad ku nooshahay.
Waxaan isbarbar dhigi doonaa celceliska dakhliga sanadlaha ah ee qareennada toban dal oo kala duwan, laga bilaabo kan ugu sarreeya illaa kan ugu hooseeya, oo ah doolarka Mareykanka (USD).
Tani waxay gacan ka geysan doontaa go'aaminta waddamada lacagta ugu badan siiya qareenadooda.
Waayo -aragnimadu, sida waddamada kale ee la sheegay, ayaa ah qodobka ugu muhiimsan ee go’aamiya kala -duwanaanshaha mushaharka.
Switzerland ayaa ugu sareysa liiska waddamada bixiya qareenadooda lacagta ugu badan. Dakhli sanadeed dhexdhexaad ah oo ah $ 260,739, way fududahay in la arko sababta.
Magdhowga ugu hooseeya ee sanadlaha ah ee looyarka Swiss waa $ 120,279, halka mushaharka ugu sarreeya ee sannadlaha ahi yahay $ 414,058.
2. Kanada (193,796 USD)
Kanada ayaa kaalinta labaad kaga jirta liiskayaga, oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 193,796 doollar.
Magdhawga ugu hooseeya ee sanadlaha ah ee qareenka Kanada waa $ 88,796 doollar, halka kan ugu sarreeya uu yahay $ 308,167 dollar.
Mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee go'aamiya waa waayo -aragnimo.
Liiskayaga, Australia ayaa gashay kaalinta saddexaad. Celceliska mushaharka qareenka Australia waa $ 142,033. Mushaharka ugu hooseeya ee sanadlaha ah waa $ 65,289, halka mushaarka ugu badan uu yahay $ 226,031.
Gunnada qareenka ee Maraykanka, sida waddamada kale, waxaa si weyn u go'aamiya waaya -aragnimadiisa.
Nederland waxay ku jirtaa kaalinta afaraad liiskayaga, iyadoo celcelis ahaan mushahar ahaan loo siiyo $ 134,370. Mushaharka sanadlaha ah ee qareenka ugu hooseeya waa $ 59,641 mushaharkooda ugu badanna waa $ 214,520.
Qareenka leh khibrad ka yar laba sano wuxuu kasban karaa qiyaastii $ 70,300 sanadkii, halka midka leh shan ilaa toban sano oo waayo -aragnimo ah uu kasban karo qiyaastii $ 139,000 sanadkii.
Celceliska mushaharka qareenka Norwey waa $ 131,041. Mushaharka ugu hooseeya ee sanadlaha ah waa $ 60,255, halka mushaarka ugu sarreeya uu yahay $ 208,261 sanadkii.
Qareennada leh waayo -aragnimo ka yar laba sano waxay kasbadaan qiyaastii $ 68,320 sanadkii, kuwa leh laba illaa shan sano waxay kasbadaan qiyaastii $ 91,200 sanadkii, kuwa leh lix illaa toban sano waxay kasbadaan qiyaastii $ 134,550 sanadkii.
Iyada oo celcelis ahaan mushaharkeedu yahay $ 118,540, Japan ayaa kaalinta lixaad kaga jirta adduunka. Mushaharka caadiga ah waxaa ka mid ah guryaha, gaadiidka, iyo waxyaalaha kale ee lagu raaxeysto.
Magdhawga ugu hooseeya ee qareenka Japan waa $ 54,528, halka mushaharka ugu badan ee sannadlaha ahi yahay $ 188,753.
7. Boqortooyada Ingiriiska (118,300 USD)
Iyada oo celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah $ 118,300, Boqortooyada Ingiriiska ayaa ku jirta kaalinta toddobaad.
Dakhliga sannadka ugu hooseeya ee looyarku waa $ 36,485 doollar, halka mushaharka ugu sarreeya ee sannadlaha ahi yahay $ 291,606 doollar. Waayo -aragnimadu, sida ummadaha kale, waxay door ka ciyaaraysaa kordhinta dakhliga iyo hoos u dhaca.
Jinsigu wuxuu door ku leeyahay mushaharka qareennada ee Boqortooyada Ingiriiska, si ka duwan Ireland, Mareykanka, iyo Jarmalka.
8. Jarmalka (101,484 USD)
Mushahar celcelis ahaan sanadlaha ah $ 101,484, Jarmalku wuxuu ku jiraa kaalinta siddeedaad. Dakhliga ugu hooseeya ee qareenka Jarmalka waa $ 46,675 sanadkii, halka mushaarka ugu badan uu yahay qiyaastii $ 161,479 sanadkii.
Waayo -aragnimadu waxay qayb ka qaadataa kordhinta magdhawga qareenka Jarmalka, sida ay ku samayso Ireland iyo Maraykanka.
Qareennada aan lahayn wax ka badan shan sano oo waayo -aragnimo ah waxay filan karaan inay kasbadaan $ 52,900 illaa $ 70,700 sanadkii.
9. Dawladaha mideysan ee Ameerika (96,257 USD)
Qareennada dalka Mareykanka ayaa celcelis ahaan sameeya $ 120,000 sanadkii, sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka. Celceliska mushaharka qareennada badeecadaha iyo badeecadaha ayaa ku dhow $ 200,000, halka celceliska mushaharka qareennada dawladda gobolku yahay $ 85,000.
XIDHIIDHKA: Sida Fudud Loogu Rakibo Kaamirooyinka Amniga Guriga | 2022
Hadda waxaa jira in ka badan 800,000 oo qareen oo ku sugan Mareykanka, kuwaas oo intooda badan u shaqeeya shirkadaha sharciga. Degmada Columbia, California, New York, iyo Pennsylvania ayaa ka mid ah gobolada ugu mushaarka badan.
Ireland waxay ku jirtaa liiska ugu hooseeya, oo leh celcelis mushahar sanadle ah $ 92,173.
Magdhawga ugu hooseeya ee qareenka Irish waa $ 42,432 mushaharkiisa ugu weyn ee suurtogalka ahina waa $ 146,156.
Heerarka mushaharka ee Ireland ayaa laga yaabaa inay weli isbedelaan iyadoo ku xidhan khibrada. Waxaa lagu siin doonaa si ka duwan sidii hore iyada oo ku xidhan inta sano ee khibradda aad leedahay.
10ka ugu sarreeya Qareennada Dambiyada ee ugu mushaharka badan
Sababtoo ah dabeecadda shaqadooda, qareennada si weyn ayaa loo xushmeeyaa. Qareennada ayaa inta badan ah kuwa go'aamiya natiijada dacwad.
Guud ahaan, hal xeer ama ka kale ayaa xukuma bulshadeena. Dhinaca kale, aadamiga, waxaa hubaal ah inay khalad sameeyaan oo ay jebiyaan mid ka mid ah sharciyada meesha yaal, oo ah halka ay garyaqaannadan nooga soo gurmadaan.
Iyadoo aan loo eegin nooca kiiska dembiga ee aad u keento qareenadan, waxay kaa caawin karaan inaad ku guulaysato. Ka mid noqoshada tobanka ugu sarreeya qareennada dambiyada ee ugu mushaharka badan waxay u baahan tahay wax badan marka la eego guulaha, khidmadaha adeegga, iyo xaddiga shaqada ay helaan.
Halkan waxaa ah liiska 10 -ka ugu sarreeya qareennada dambiyada ugu mushaarka badan adduunka:
Jose Baez waa qareenka ugu fiican adduunka, waxaana uu haystaa lacag dhan 7 milyan oo doolar. Wuxuu ahaa lataliyaha ugu weyn ee kiiska dilka Casey Anthony, kaas oo ku kasbaday darajo sarre.
Jose wuxuu qareen ahaan uga soo shaqeeyay qaar ka mid ah kiisaska dambiyada ugu waaweyn adduunka, oo ay ku jiraan kiisaska Elviria Gracia iyo Wilfredo Vazquez.
Jose wuxuu ka qalin -jabiyay Jaamacadda Sharciga ee St. Thomas sannadkii 1997. Mid kasta oo ka mid ah dacwadaha ciqaabta ah ee uu Jose qabtay, wuxuu ka qaadaa lacag ku dhow hal milyan oo doollar.
Willie waa af -hayeen dhiirigelin ah marka lagu daro inuu yahay qareen.
Gary wuxuu kasbaday naaneyska “Dilaaga Weyn” ka dib markii uu si guul leh u dacweeyay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Ameerika isagoo matalaya macaamiishiisa.
Wuxuu helay qaar ka mid ah abaalmarinnada xeerbeegtida ugu weyn iyo degsiimooyinka dalka, oo ay ku jiraan dacwadaha lagu qiimeeyo in ka badan $ 30 bilyan.
Willie wuxuu ka qaadaa in ka badan 100,000 USD kiis kasta oo uu gacanta ku dhigay. Maaddaama uu ka mid yahay 10-ka ugu sarreeya qareennada dambiyada ee ugu mushaharka badan adduunka, qiimahiisa saafiga ah waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay qiyaastii 6,300,000 USD.
John wuxuu ka qalin jabiyay Dugsiga Sharciga ee UCLA oo uu ka qaatay shahaadada sharciga. Wuxuu ka mid yahay tobanka ugu sarreeya qareennada dambiyada ee ugu mushaharka badan, waana la jecel yahay.
John waa garyaqaan caan ah oo haysta hanti ka badan $ 50 milyan oo doolar. Dunida madadaalada, John waa qareen caan ah.
Beach Boys, Michael Jackson, Carlos Santana, Aerosmith, Rolling Stone, Playboy, Penthouse, iyo Forbes ayaa ka mid ah dadka caanka ah ee uu u shaqeeyay.
Vernon waa qareen Mareykan ah oo caan ah, u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ah, iyo u doodaha ganacsiga. Wuxuu horey u ahaa la -taliyaha gaarka ah ee Bill Clinton, madaxweynaha Mareykanka.
Vernon wuxuu shahaadada sharciga ka qaatay Dugsiga Sharciga ee Howard.
Hantidiisa saafiga ah waxaa lagu qiyaasaa malaayiin doolar. Vernon wuxuu kiis kasta ka qaadaa $ 600,000, taas oo macnaheedu yahay in dad kooban ay awoodi karaan adeegyadiisa.
Harish waa garyaqaan Hindiya caan ka ah oo diiradda saara arrimaha ganacsiga, dastuurka, iyo canshuuraha.
Sagaal sano, wuxuu ahaa Garyaqaanka Guud ee Hindiya. Macaamiilkiisa waxaa ka mid ah Reliance, Tata, ITC, iyo Vodafone. Hantidiisa saafiga ah ayaa lagu qiyaasay inay gaareyso 2.5 milyan oo doollar.
Vikki Ziegler wuxuu leeyahay hanti dhan $ 2.5 milyan oo doolar qareen, qoraa, iyo shaqsiyadda telefishanka ee Maraykanka.
Ziegler waa dhalasho New Jersey ah oo shahaadada koowaad ee jaamacadda ka heshay Jaamacadda Rhode Island. Waxay u gudubtay Dugsiga Sharciga ee Kuliyadda Quinnipiac ee Connecticut si ay u hesho shahaadada sharciga. Khibraddeeda ayaa ka dhigtay inay ku guuleysato dhammaan noocyada kiisaska dambiyada ee loo keenay.
XIDHIIDHKA: Sida Si Fudud Loogu Iibsado BTT (BitTorrent coin)
Qiimaha saafiga ah ee Vikkie ayaa lagu qiyaasay 2.5 milyan oo doolar.
Stacey Gardner waa moodel iyo garyaqaan u dhashay Maraykanka oo leh lacag dhan 1 milyan oo doolar.
Ninka beerta ka shaqaynayaa aad buu u qurux badan yahay oo markasta oo ay maxkamadda tagto wuxuu u eg yahay tusaale. Waxay ka qalinjabisay Dugsiga Sharciga ee Koonfur -galbeed.
Hantida saafiga ah ee Howard Stern ayaa la filayaa inay gaadho $ 650 milyan sannadka 2022. Waa jilaa ku salaysan New York, soo-saare, iyo shakhsiyadda telefishanka. Stern wuxuu caan ku noqday kadib markii uu aqbalay booska suuqgeynta Benton & Bowles.
Wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda California. Howard waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu caansan martigaliyayaasha raadiyaha.
Isagu waa qareenka ugu sarreeya uguna sarreeya ee ugu mushaharka badan California maadaama uu ka qaado wax ka badan 10,000 USD maalintii.
Albert Stainoz waa muwaadin Maraykan ah. Waa garyaqaan sarrifle.
Albert wuxuu ku guulaystay ku dhawaad ​​99.43 boqolkiiba kiisaskiisa xirfadiisa wuxuuna ka qaataa lacag badan macaamiishiisa taas beddelkeeda damaanad qaadka maxkamadda sare.
Stainoz waa qareenka 9-aad ee ugu qaalisan liiskayaga qareennada ugu mushaharka badan adduunka, wadar ahaanna waxay dhan tahay $ 320,000,000.
Benjamin Civiletti waa garyaqaan Mareykan ah oo caan ah. Tan iyo 2005, wuxuu ka shaqeeyay mihnadda sharciga. Benjamin waa mid ka mid ah qareennada dadaala oo aan kaliya ka qaadin lacag aad u badan laakiin sidoo kale ku guuleysta kiis kasta.
Benjamin wuxuu sare u kacay liiskayaga, isagoo wadar ahaan qiimihiisu yahay $ 300,000.
Isagoo ka mid ah garyaqaannada ugu mushaharka badan, sida uu Benjamin yahay, xitaa markuu jiro 81 sano, weli wuu ku guuleysan karaa kiis kasta oo dambi.
Isagu waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn uguna sarreeya 10 qareen ee dambiilayaasha ugu mushaharka badan adduunka.
FAQs ee Qareenada Dambiyada ugu Mushaarka Badan Adduunka
Aaway meelihii ugu fiicnaa ee lagu shaqayn lahaa qareen ahaan?
Halkaan waxaa ah liiska meelaha ugu fiican ee lagu shaqeeyo qareen ahaan?
Qareen noocee ah ayaa mushaarka ugu badan qaata?
Dadka sida adag ugu shaqeeya shaqooyinkooda ee ku dadaala sidii ay u heli lahaayeen natiijooyinka ugu wanaagsan waxay sameeyaan waa noocyada qareennada lacagta ugu badan sameeya. Hoos waxaa ah noocyada qareennada lacagta ugu badan sameeya:
Qareenka Xuquuqda Rayidka
Qareenka qoyska iyo furiinka
Qareenka difaaca dambiyada
Dhaawac shakhsi ah
Qareennada hantida caqliga
Qareenada daryeelka caafimaadka
Immisa ayay qareenadu sameeyaan sanad?
Qareennada Mareykanka waxay helaan celcelis ahaan $ 73,604 sanadkii. Mushaharka qareennada ayaa sida caadiga ah ka bilowda $ 14,000 sanadkii wuxuuna gaaraa $ 204,000 sanadkii.
Awoodda dakhligooda waxaa saameeya arrimo ay ka mid yihiin goobtooda juquraafi, heerka khibradda, iyo aagga takhasuska leh.
Waa kuwee 10-ka ugu sarreeya qareennada dambiyada ugu mushaarka badan sannadka 2022?
Waa kuwan liiska 10 -ka qareen ee ugu mushaarka badan:
Waa maxay xirfadaha aan u baahanahay si aan u noqdo garyaqaan dambiile ah?
Si ay ugu fiicnaadaan shaqadooda, qareennada dambiyada waa inay lahaadaan dhowr karti oo kale, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Xirfadaha qoraalka iyo hadalka oo aad u fiican
Xirfadaha hal -abuurka iyo falanqaynta
Xirfadaha cilmi baarista iyo baaritaanka
Aqoonta iyo waayo -aragnimada sharciga
Si dib loogu noqdo, garyaqaannada dambiyada waa lama huraan, waxaana lagala tashadaa caawimaad marka dadku ku xadgudbaan mid ka mid ah sharciyada beel ama qaran. Maadaama dad badan ay caasiyeen sharciga, qareennada dambiyada ayaa noqda kuwa hodan ah.
Shawn Stussy Net qiimihiisu yahay 2022| Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda
Waa imisa Qiimaha Caymiska Tababaraha?
Tababarayaasha gaarka ah, sida ganacsiyada kale ee yar yar, waxay la kulmaan khataro maalinle ah, labadaba naftooda iyo kuwa…
10 ka Koodh ee ugu Qaalisan Dalka Maraykanka
Eray caan ah oo ay adeegsato Adeegga Boosta ee Maraykanku waa ZIP Code. Waxaa loo isticmaalaa sida…
Sida Looga gorgortamo Kiradaada 2022
Ku dhawaad ​​wax kasta oo noloshu waa gorgortanka dhabta ah taasna waxaa ku jira kirada. Waxaa xiiso leh in la ogaado in dadka intooda badan…